Ukudibanisa kunye nokwahlula iiseli kwi-Excel 2007
Unga hamba kunye neziko idatha ethe nkqo okanye ethe nkqo kwiiseli ezininzi kwi-Excel 2007. Unako ukudibanisa okanye Umehlulelwano iseli edityanisiweyo kwiiseli zayo zokuqala, ezizodwa. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kokudibanisa kunye neziko kwi-Excel 2007 kukubeka ngokuthe tye isihloko kwiphepha lokusebenzela ngaphezulu kwetafile.
Ungahlulahlula iseli ebikhe yadityaniswa ngaphambili.
Ukudibanisa kunye nokugcina iiseli
Landela la manyathelo ukudibanisa kunye nokubeka uluhlu lweeseli:
Khetha uluhlu lweeseli ofuna ukudibanisa kunye neziko.
amayeza ujonge indawo
Ungasebenzisa ukudibanisa kunye neziko kuphela kudibaniso lweeseli.
Isihloko sephepha lokusebenzela ngaphambi kokudibana kunye nokubekwa embindini.
Cofa iqhosha lokuHlanganisa kunye neZiko kwiqela loLungelelwaniso kwiKhaya laseKhaya.
Iiseli zidityaniswe kwiseli enye, kwaye isicatshulwa (ukuba sikhona) sigxile kwiseli edityanisiweyo.
Isihloko sephepha lokusebenzela emva kokubeka phakathi kwiikholamu A ukuya ku-E.
(Ngokuzithandela) Guqula ulungelelwaniso kwiseli edityanisiweyo, ukuba uyafuna.
Umzekelo, cofa indawo yokulungelelanisa isicatshulwa sasekunene kwiqela loLungelelwaniso ukuba ufuna isicatshulwa esikwiseli esidityanisiweyo silungelelaniswe ngokuchanekileyo endaweni yokugxila.
Ukuba ufuna ukudibanisa iiseli ngaphandle kokufaka okubhaliweyo kwiseli, cofa utolo olwehlayo ecaleni kweQhina lokudibanisa kunye neZiko kwiqela loLungelelwaniso kwaye ukhethe nokuba uhlanganise ukudibanisa okanye ukudibanisa iiseli.
Ukwahlula iseli edityanisiweyo
Ukuba ufuna ukwahlula iseli oyidibanise neqhosha lokudibanisa kunye neziko, landela la manyathelo:
Cofa kwiseli edityanisiweyo.
Iqhosha lokudibanisa kunye neZiko libonakala likhethwe kwiqela loLungelelwaniso.
Cofa iqhosha lokudibanisa kunye neziko kwiqela loLungelelwaniso.
Iseli edityanisiweyo ibuyela kuluhlu lweseli kwakhona, kunye nawo nawuphi na umbhalo oqulathwe kwimiboniso yeseli edityanisiweyo kwiseli ephezulu yasekhohlo kuluhlu.
iziphumo ebezingalindelekanga zangaphambili
iingoma eziphambili zegitare lonke ixesha
ngaphezulu kwekhawuntareni yamayeza isicaphucaphu
Elona xesha lilungileyo losuku lokuthatha i-zoloft
phantsi kwentlungu yobambo lwasekunene